QIIMO DHAC: Kadib Qaab Ciyaareedkii Musiibada Ahaa Iyo Qalalaasihii Xili Ciyaareedkan, Qiimaha Kooxda Man United Oo Si Layaableh Hoos Ugu Soo Dhacay. - Gool24.Net
Manchester United waxa uu xili ciyaareedakni u ahaa mid musiibo ah isla markaana ay qalalaase xun dhexda kaga soo jirtay wuxuuna kaas saamayn xun ku yeeshay koobabkii ay United u tartamaysay oo dhamaantood gacmo madhan ka taagan tahay halka ay hadda luminayso rajadii ay afarta sare ka qabtay si ay Champions league ugu soo baxdo.
Laakiin waxaa soo baxay warkale oo naxdin ku abuuraya maamulka Man United kaas oo ka baxsan garoonka kubbada cagta waana arimo dhaqaale oo dhulka kaga soo dhacay Red Devils. Xili ciyaareedkan qiimihii Man United ayaa hal BILYAN oo gini hoos u dhacay waana boqolkiiba 25% ku yimid hoos u dhaca qiimihii United.
Bishii Augsut 2018 kii oo ahayd markii uu soo bilawday xili ciyaareedkan dhamaadka ahi waxa uu qiimaha Man United ahaa $4.27 bilyan dollar oo u dhigmaysay £3.31 bilyan gini wuxuuna ahaa qiimihii abid ugu sareeyay ee ay Man United gaadhay.
Laakiin hadda qiimo dhac wayn ayaa Man United ku yimid waxaana la cadeeyay in qiimaha Unnited uu hadda hoos ugu soo dhacay $3.25 bilyan dollar oo u dhiganta £2.52 bilyan gini iyada oo la sheegay in boqolkiiba 25% uu hoos u dhacay qiimihii kooxda Red Devils.
August 31,2018 waxaa saamiga Man United lagu iibsanayay $26.20 laakiin khamiista maanta waxa uu qiimaha saamiga Man United hoos ugu soo dhacay $19.50.
Laakiin qiimaha Man United ayaa la filayaa in uu hoos u sii dhici doono haddii ay ku fashilmaan in ay afarta sare ee Premier league ku dhamaystaan oo ay u soo baxaan Champions league iyada oo hadda ay United xaalad murugo badan ku jirto.
Haddii ay Man United u soo bixi waydo UEFA Champions League waxay seegi doontaa lacag dhan 80 milyan gini waana khasaare wayn oo markale soo gaadhi kara Red Devils.
Kadib markii uu Ole Gunnar Solskjaer uu badalay Jose Mourinho wax walba waxay noqdeen kuwo si layaableh ku socday laakiin markii shaqada si rasmi ah loo magacaabay waxay United noqotay ku laabtay xaaladii uu Mourinho kaga baxay.